DAAWO VIDEO:Cunada Iyo Habka Kaliya Ka Difaaci Kara Karoona Fayras Naftaada Difaaceeda. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Saynisyahanada Cudurka Corona Ayaa Soo saaraya Qofkasta oo Halis Ugu Jira Cudurkani Inuu Yahay Qof Ka Difaaciisa yar Yahay,Iyadoo Cudurada Kalaba Nooc kasta oo Yahiin Ay Ku Imaadaan Wax uun Naftaada Inay Fatiminada Ka Maqan yahiin.
Waxaynu isku Wada Raac Sanahay In Qofka Corona u Dhimanaya yahay,Qof Xanuunsanaa,Qof Difaacisa Hooseeyo Iyo Mid Ilahaygi Abuuray Wakhtigiisa Uga Dhigay.
Ilaha Weyn ee Sameeyey Jirka Bini’adamka Ayaa U Sameeyey Qaab Dhismiid iska Difaacaya Cudur Kasta Ilaa Adigu Aad Lumiso Qeyb ka Mid Ah Macdanta Ilahay Ku sameeyey,waxaana Jirkaga U Bahan yahay Sida Dharkaaga oo Jeex Jeexan Adan u Ogolaateen Inaadan Ogolaan ,In Jirkaga Lumiyo Tabarta Difaaca oo Cudur kasta ku nug Layn Karaya.
Digninta Corona ee Sida aad iska Ilaalin karto Malaha waxaa Ugu Muhimsan Inaad Hesho Jirkaaga Cunada Iyo Fatiminada uu U Bahan yahay,taasi oo Anu Idinku Soo Gudbinayno Macluumaadkani.
Coronavirus-ku wuxuu soo bandhigayaa kalsooni darro badan Nolosheena Inaan Dib Ugu Laabano, qofkeenna gebi ahaanba ma tirtiri karo qatarta aan ugu jirno COVID-19. Laakiin hal shay oo aan sameyn karno ayaa ah inaan cunno sida ugu caafimaad qabta uguna macquulsan.
Haddii uu Kugu Dhaco COVID-19, habka difaaca ayaa mas’uul ka ah la dagaalanka. Cilmi baaris ayaa muujineysa wanaajinta nafaqada waxay gacan ka geysaneysaa taageerida howlaha difaaca jirka .
Nafaqeeyayaalka yar yar ee lagama maarmaanka u ah la dagaallanka infakshanka waxaa ka mid ah fiitamiinnada A, B, C, D, iyo E, iyo macdanta macdanta birta, selenium, iyo zinc.
Waa tan waxa aan ognahay sida ay nafaqooyinkaani u taageereen nidaamka jirkeena iyo cunnada aan cunno si aan u helno.
Ugu Horayn Fatiminka Aynu U baahan nahay Waa fiitamiin A si looga caawiyo sameynta unugyada difaaca jirka ee baabi’iya cudurada keena infakshanka.
Fiitamiin A waxaa laga helaa kalluunka saliida leh, , miraha Iyo Digirta.
khudaarta waxaa ku jira beta-carotene , oo jirkaaga u rogi karo fitamiin A. Beta-carotene waxaa laga helaa khudaarta cagaaran ee caleenta ah iyo khudaarta cagaaran iyo oranjiga sida bocorka iyo karootada.
2. Fiitamiinada B
Fiitamiinada B , gaar ahaan B6, B9 iyo B12, waxay gacan ka geystaan ​​jawaabta ugu horeysa ee jirkaaga markey gartaan baastrool.
Waxay tan u sameeyaan iyagoo saameyn ku leh wax soo saarka iyo waxqabadka unugyada “ dilaaga dabiiciga ”. Unugyada dila ee dabiiciga ahi waxay u shaqeeyaan iyaga oo u horseeda unugyada cudurka qaba “implode”, hab la yiraahdo apoptosis .
Ciyaar kubada cagta ah, doorkan wuxuu u egyahay in ilaalada amaanka ay joojinayaan daawadayaasha marin habaabinta ah ee isku dayaya inay ku ordaan garoonka oo carqaladeeyaan ciyaarta.
B6 waxaa laga helaa badarka, digiraha, khudradda cagaaran, miro, kalluun, digaag iyo hilib.
B9 ( folate ) ayaa ku badan khudaarta cagaaran ee caleenta, digiraha, miraha iyo abuurka waxaana lagu daraa bur burinta ganacsiga.
B12 (cyanocobalamin) waxaa laga helaa waxsoosaarka xoolaha, oo ay ku jiraan ukunta, hilibka iyo caanaha.
3. Fiitamiinnada C iyo E
Marka jirkaagu la dagaallamayo infekshan, wuxuu la kulmaa waxa loogu yeero culeyska maskaxda. Walwalka ‘Oxidative stress’ wuxuu horseed u yahay soo-saarista xag-jiryo bilaash ah oo waxyeeli kara derbiyada unugyada, iyagoo sababaya waxa ku jira inay galaan unugyo isla markaana ay sii kordhiyaan caabuqa.
Fiitamiin C iyo fiitamiin E waxay ka caawiyaan kahortaga walaaca ashitada.
Fiitamiin C wuxuu kaloo caawiyaa nadiifinta qulqulka unugyada iyadoo la soosaarayo unugyo takhasus leh si kor loogu qaado jawaab celinta jirka, oo ay kujirto maadooyinka loo yaqaan ‘neutrophils , lymphocytes iyo phagocytes .
Markaa doorka fitamiin C halkan wuxuu la mid yahay nadiifinta garoonka kubada cagta ciyaarta kadib.
Ilaha wanaagsan ee laga helo fitamiin C waxaa ka mid ah liin, liin, limes, miro, kiwifruit, broccoli, yaanyo iyo capsicum.
Fiitamiin E waxaa laga helaa nuts, khudaarta caleenta cagaaran iyo saliidaha khudradda.
4. Fiitamiin D
Unugyada difaaca qaarkood waxay u baahan yihiin fiitamiin D-ga si ay uga caawiyaan baabi’inta cudurada keena infakshanka.
In kasta oo qorraxdu u oggolaanayso jirka inuu soo saaro fitamiin D, ilaha cuntada oo ay ku jiraan ukunta, kalluunka iyo caanaha qaar iyo noocyada margarine-ka waxaa lagu xoojin karaa fiitamiin D (taasoo la macno ah in dheeri lagu daray).
Dadka badankood waxay u baahan yihiin kaliya daqiiqado yar banaanka inta badan maalmaha.
Dadka qaba fitamiin D yaridu waxay u baahan karaan kabitaan. Dib -u-eegista 25 daraasadood oo laga helay fiitamiin D-ga ayaa kaa caawin kara kahortaga caabuqyada neef-mareenka , gaar ahaan dadka liita.
Waxaan u baahan nahay bir, zinc iyo selenium koritaanka unugyada difaaca, iyo howlaha kale.
Birta waxay gacan ka geysaneysaa dilaaga xanuunada iyadoo kordhineysa tirada xag-jiryada bilaashka ah ee baabi’in kara. Waxay kaloo nidaamisaa falcelinta enzyme-ka ee muhiimka u ah unugyada jirka ee difaaca si loo garto loona beegsado cudurrada.
Zinc wuxuu caawiyaa joogteynta sharafta maqaarka iyo xuubka xuubka. Zinc iyo selenium sidoo kale waxay u shaqeeyaan sidii antioxidant-ka, iyagoo ka caawinaya sidii ay u yareyn lahaayeen qaar ka mid ah waxyeelada ay keento walbahaarka sunta.
Birta waxaa laga helaa hilibka, digaagga iyo kalluunka. Ilaha qudaarta waxaa ka mid ah digiraha, miraha oo dhan iyo badarka quraacda lagu xoojiyay ee birta.
Zinc waxaa laga helaa hilibka cuntooyinka kale ee badda, hilibka, digaagga, Hilibka qalalan iyo lowska.
Waa run inay suuqyada waaweyn qaarkood ka soo baxeen agab gaar ah xilligan. Laakiin intii suurtagal ah, xoogga saar cunista noocyo kala duwan oo cunto ah mid kasta oo ka mid ah kooxaha cuntada aasaasiga ah si kor loogu qaado qaadashada fiitamiinnada iyo macdanaha.
In kasta oo fiitamiinnada iyo kaabsitka macdanta laguma talinayo guud ahaan dadka , haddana waxaa jira waxyaabo laga soo reebayo.
Haweenka uurka leh, dadka qaarkood ee qaba xaalado caafimaad oo raaga, iyo dadka qaba xaalado macnaheedu yahay inaysan si sax ah wax u cuni karin ama cunaan cunno aad u xaddidan, ayaa u baahan kara kabitaan gaar ah. La hadal takhtarkaaga, Cilminajiyaha ku-tababaran Aqoonsiga ama farmashiistaha.
Cuntada ka dambeysa, waxaa jira talaabooyin kale oo aad qaadi karto si aad u caafimaad ugu yeesho sida ugu macquulsan wajiga coronavirus.
Jooji sigaar cabista si aad u wanaajiso awooda sambabkaaga ula dagaallamo caabuqa, u samee jimicsi xoog dhexdhexaad ah sida socodka oo yara socda, hel hurdo kugu filan , ku celceliso mashquulinta bulshada oo gacmahaaga ku maydh saabuun si joogto ah.
Waxaa jira dhowr nafaqooyin ah (naxaas, folate, bir, selenium, zinc iyo fiitamiin A, B6, B12, C iyo D) oo door muhiim ah ka ciyaara nidaamka difaaca jirkeena. Waxaa guud ahaan lagula talinayaa in la cuno cunto caafimaad leh oo isku dheellitiran oo hodan ku ah miraha iyo khudaarta, taas oo noo oggolaaneysa inaan ku helno nafaqooyinkaas cuntadeena. Cunista caafimaadka ka sokow, firfircoonaanta jirka , yareynta buufiska iyo helitaanka hurdo kugu filan waxay sidoo kale gacan ka geysaneysaa kahortaga u shaqeynta tallaalka caadiga ah.
In kasta oo aynan suurtagal ahayn in fayraska lagu kala qaado cuntada faddaraysan, habdhaqanka badbaadada cuntada ee wanaagsan ayaa had iyo jeer lagula taliyaa in la yareeyo halista cudurada ka dhasha cuntada. Markaad gacanta ku hayso ama diyaarinayso cuntada, hubi inaad:
Gacmahaaga ku dhaq 20 ilbiriqsi ka hor iyo ka dib diyaarinta ama cunida cuntada
Ku dabool afkaaga iyo sankaaga warqad ama gacantaada markii aad qufacdo ama hindhisto oo xusuusnow inaad gacmahaaga dhaqdo kadib
Dhaq miraha iyo khudradda ka hor intaadan cunin
Jeermis dusha sare iyo walxaha ka hor iyo ka dib isticmaalka
Kala saar cuntooyinka cayriin iyo kuwa karsan si looga fogaado microbes-ka waxyeelada leh cuntooyinka cayriin ah ee ku faafaya cuntooyinka diyaarka u ah in la cuno
U adeegso maacuuno kala duwan / goyn go’an ah cuntooyinka cayriin iyo kuwa la kariyey si aad uga hortagto faddaraynta
Hubso inaad kariyo oo ku kululeyd cuntada heerkul ku filan (≥72 ° C 2 daqiiqo)
Previous articleDAAWO VIDEO:Qudbada MD Farmaajo Dhanka Internetka Shirka IGAD Shirarkii Madaxda Dunida Internet loo Badaley.
Next articleIGAD Awood ma uleedahay in ay si wada jir ah uga hortagto Cudurka Coronavirus?.